मिलन म्याग्दीले गर्‍यो बानियाँलाई सम्मान ! - Bulbul Samachar
मिलन म्याग्दीले गर्‍यो बानियाँलाई सम्मान !
bulbul आइतवार, असार २७ गते 142 views
गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीले संस्थाका सल्लाहकार अशोक बानियाँलाई सम्मान गरेको छ । शनिबार संस्थाको कार्यालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मिलन म्याग्दीले संस्था स्थापना कालदेखि हालसम्म पुर्‍याएको योगदानको कदरसहित सम्मान गरिएको हो ।
२०५६ सालमा मिलन म्याग्दी स्थापना गर्नेदेखि संस्थालाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन महत्वपूणर् भूमिका खेलेको भन्दै सल्लाहकार बानियाँलाई सम्मान गरिएको मिलन म्याग्दीले जनाएको छ । उहाँलाई मिलनका अध्यक्ष शिव बानियाँले दोसल्ला ओढाएर तथा निवर्तमान अध्यक्ष विनय श्रेष्ठले सम्मानपत्र प्रदान गरी सम्मान गर्नुभएको थियो ।
एमाले कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको एउटा बुँदा जसले दुबैतिर समस्या पार्‍यो !
पवर्तका युवा १० दिनदेखि सम्पर्कविहिन !